Yangon Thu Michelle - Page2of5- Official Website
10 Low Investment Business Ideas (1)
အခုချိန်မှာ အလုပ်နားထားသူ၊ လစာအလျော့ခံရသူ၊ အလုပ်လုံးဝမရှိတော့သူ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဝင်ငွေမရှိတော့သူတွေအတွက် ပိုက်ဆံဝင်မဲ့နည်းလမ်းတွေ (Low investment business ideas) လိုက်ရှာထားတယ်။ အင်တာနက်တစ်ခွင်ဗြဲဗြဲစင်အောင် နည်းလမ်းတွေရှာသော်လည်း လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ မကိုက်တာ အများကြီး။ ဆိိုတော့ သိတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲက ကျွမ်းကျင်မှု၊[…]
How to make Eco Brick
Environmental, Video January 25, 2021
Let’s see why and how I make eco brick
A winter morning photo shoot
Portrait & Glamor January 22, 2021
One of the winter dawn in Yangon, it is fresh air, clear sky, enormous beauty of wildflower on the white wall[…]
Portrait & Glamor January 20, 2021
On the top floor of an old Armenian church in downtown Yangon, there isalight, that is touch to the[…]
Myanmar Traditional Bridal Dress
Portrait & Glamor January 18, 2021
ဆောင်းရာသီဆို တော်ဝင်သဇင်နဲ့မှ ….
Short trip to Tontay
Portrait & Glamor January 16, 2021
ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုဖို့ မလိုပါဘူး နင့်ကိုငါချစ်တာကို နင်အသိအမှတ်ပြုဖို့ပဲလိုတာပါ မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ)
Portrait & Glamor January 12, 2021
This is my portrait sketch by artist Nay Nay Htoo.
No Trash Burn
Environmental, Video January 7, 2021
ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရေ အခုနေထိုင်ရတဲ့ ရပ်ကွက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောင်းလဲလာတဲ့အရာကို သတိထားမိလား။
Railway road photo shooting
Portrait & Glamor January 7, 2021
Photo shooting ataremote place of Yangon foraJapanese photographer, Takeshi Koaiki. The photo modeling job is my passion,[…]
Portrait & Glamor January 2, 2021
၂၀၂၀ က တချို့တချို့တွေရဲ့ မိသားစုတွေ ဝေးကွာသွားစေတယ်။ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တန်ဘိုးထားရမယ့် အချိန်လေးတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတယ်။ ပင်ပန်းခက်ခဲစွာနဲ့ အရာရာကို ရင်ဆိုင် ရုန်းကန်ရတယ်။ လူဖြစ်နေသမျှတော့ ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ရောက်ဖို့လျှောက်နေရဦးမှာပဲ။ အဲဒီတော့ အားတင်းပြီး ၂၀၂၁ ကို[…]
Portrait & Glamor December 31, 2020
May this year bring new happiness, new goals, new achievements, andalot of new inspirations on your life. Wishing you[…]
46th National Akha Day
Portrait & Glamor December 28, 2020
46th Akaha National Day ၄၆နှစ်မြောက် အာခါအမျိုးသားနေ့
Burmese traditional wedding dress
Portrait & Glamor December 26, 2020
Myanmar traditional wedding dress advertisement photo shooting at indoor studio of Kyal Tha Zin bridal and groom service.
Appearance at wedding ceremony
Portrait & Glamor December 17, 2020
Attending events and ceremony is my hobby as well. Meet with people, talk about broad of topics, social life and chance[…]
Places and landmarks, Video December 7, 2020
ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ၁၉၂၀ခုနှစ်မှာ စတည်ဆောက်ခဲ့လို့ ၂၀၂၀မှာ နှစ်တစ်ရာပြည့်သွားပြီ။ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာတောင်ဆိုတာ မျိုးဆက် သုံးဆက်စာလောက်ရှိတယ်နော်။ ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များ ဗဟိုစာကြည့်တိုက်နဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ဆိုပြီး စာကြည့်တိုက်နှစ်ခုရှိတယ်။
Places and landmarks, Video November 20, 2020
ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ ..အိမ်မှာနေရလွန်းလို့ စိတ်လေနေကြပြီ ဟုတ် ….။ မြို့ပြင်လည်းထွက်မရ၊ အိမ်ထဲမှာလည်းမနေချင်၊ လူထူထူဆိုလည်း ကြောက်နေရတယ်ဆိုရင် လုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ staycation မလုပ်ချင်ဘူးလား …။ အခု video လေးက Staycation in Sedona Yangon ပဲဖြစ်ပါတယ်။
YGNThu Vs U Ye Min Oo Ep.1
Interview, Video October 26, 2020
ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရင်းနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု့ကို အစိုးရက ဘာလို့ မလုပ်တာလဲ။
YGNThu Vs U Ye Min Oo Ep.4
ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ လေလွင့်ကလေးငယ်တွေ၊ လမ်းဘေးမှာ တောင်းရမ်းနေတဲ့သူတွေနဲ့ အနာဂတ် ပညာရေး၊ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးရဲမင်းဦး ဘယ်လိုသုံးသပ်ထားလဲ။
YGNThu Vs U Ye Min Oo Ep.2
ချစ်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတို့ရေ ရန်ကုန်မြို့တော်က တစ်ချိန်က သစ်ပင်တွေနဲ့ စိမ်းလန်းတဲ့မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အခုကျတော့ သစ်ပင်မရှိတော့တာကြာပေါ့။